Ingabe VoIP yothengisa umkhiqizo noma Ukusabalalisa Amaminithi?
Liberate!!!... Thengisani VoIP kusebenziswe ifoni njengemodemu nenkampani siqu zefoni yakho Inthanethi.
Ngabe usebenza imizuzu ukusabalalisa i-zefoni Inthanethi (IP) nezinye nabathengisi VoIP?
inzuzo yakho wekhasi incane wokusabalalisa imizuzu siphile Umhlinzeki engaphansi ukuba ibhalansi?
Musa kwenzeke OKWENGEZIWE! VoIP yothengisa umkhiqizo noma Ukusabalalisa isikhathi ukudala akho Inthanethi zefoni Inkampani!
Kungani Umsebenzi VoIP?
Imakethe VoIP likhula ngokushesha futhi abe ubuchwepheshe kuqhakanjiswe ukuthi luphele. Okukhulu izindleko imali nezilungiselelo eziphambili ukunikela kokubili abasebenzisi zokuhlala kanye ibhizinisi kuyizinto eziyinhloko emakethe abashayeli.
Nokwanda inombolo yabasebenzisi VoIP, ekubeni umthengisi VoIP kusho ukufaka emakethe isilungele ukwanda ngokushesha futhi engase aphile kuhle.
futhi ncamashi okwenzayo ...
Ngenxa yothengisa umkhiqizo ekubeni, Ukusabalalisa noma yothengisa umkhiqizo VoIP kudlulela ngalé. Kuyinto ukukunika ithuba bayaqhubeka bekhula kwezomnotho, expandirte entrepreneurially futhi into ebaluleke kakhulu: occupationally ukuzibusa.
Yilokho, Ukusabalalisa VoIP ingafinyelela emisebentini legcwele kanye inkululeko ngokwezimali uma unquma ukugibela isinyathelo esilandelayo ... lokho? I Escalon ukuba abe umhlinzeki VoIP noma wholesale.
Ukusebenza njengoba VoIP yothengisa umkhiqizo noma Ukusabalalisa Amaminithi ngokuzenzakalela kukwenze umthengisi!
Umhlinzeki VoIP kube kukuvumela ukudala yakho siqu Inthanethi zefoni Inkampani!
TR3S Izizathu ukuzibusa
Ungaqala ibhizinisi lakho siqu ngaphandle ukutshalwa kwezimali ezinkulu kanye nemikhawulo.
VoIP ikuvumela ukuba Umhlinzeki VoIP sipho amasevisi kakhulu kumakhasimende osekuvele kukhona futhi wenze imali eningi. ibhizinisi yakho iza isixazululo turnkey ebandakanya ithuluzi umsebenzisi enembile, Abaphathi be-Akhawunti, amazinga, amasevisi, ukwesekwa lobuchwepheshe kanye nezinye izakhi ukuthi udinga ukuthi ube yimpumelelo usomabhizinisi VoIP.
Ungasetha siqu amazinga VOIP SERVICES ukuthengisa.
inkululeko Ubude ukukhetha abathwali ukuthi ufuna ukuqinisekisa amazinga best VoIP emakethe. Ngenxa VoIP amanani wholesale aphansi kakhulu, Ungakwazi ukukhiqiza a inzuzo enkulu kumakhasimende akho ngoba ukuthengisa ukuba amanani okudayisa. Ngakho unganquma kangakanani inzuzo ozenzayo, njengoba khulula ukusetha amanani akho ayethanda amasevisi VoIP. Prodrás ukuthuthukisa isu zamanani, ezikufanelayo izidingo zebhizinisi kanye emakethe, nokuheha amakhasimende amaningi, ukudala amanani eziningana, amapulani kanye rates yokukhangisa.
Ungakwazi ukuphatha ibhizinisi lakho ngaphandle ikhodi noma IZINHLELO.
Udala inkampani yocingo, get kuseva siqu amisiwe VoipSwitch kulula ukuyisebenzisa platform ukulawula akhawunti lwezeMpilo Usizo. Ungakwazi ukulawula ngokuphelele konke, ukusetshenziswa kwe-akhawunti, izingcingo esebenzayo, izimali, abahlinzeki, abasabalalisi zakho nokuningi kusuka kunoma iyiphi idivayisi exhunywe kwi-Inthanethi.
Kuyinto umhlinzeki global VoIP Amaminithi
Ukudala nokuthuthukisa ibhizinisi lakho siqu Inthanethi Telecommunications (izwi IP) ngenkathi ozithengisayo imizuzu nge amazinga akho amakhasimende ngokuthi fixed kanye / noma mobile kuphi emhlabeni nge VoIP!
Ngoba ukuba Proveedor VoIP ...
It kukuvumela ukuthengisa imizuzu Isitolo esidayisa yonke impahla for IP telephony ngoba siqu opera ibhizinisi lakho shayela.
manje, nezinye izici nama izindawo enkulu amakhasimende wakho, izinkampani, amabhizinisi noma amakhaya efana Traffic Isitolo esidayisa yonke impahla, nokudayisa, Amakhadi wokufonela, Callshop, Nabadayisi nokuningi; wena 100% ezimele ukuqala ibhizinisi lakho siqu Servervoip VoipSwitch.
Inkampani yakho VoIP zefoni yakhelwe ukuphatha, monitorees imizamo namathuluzi ayinzima noma ulwazi.
Ngena ngemvume KANYE NABAHLINZEKI BAKHE,
Umhlinzeki Amaminithi VoIP Izimakethe Isitolo esidayisa yonke impahla ...
TERMINACION VOIP Isitolo esidayisa yonke impahla A-Z
Ukubambisana nezinkampani emhlabeni wonke futhi VoIP opharetha ninikeza imizila abaningi ikuvumela VoIP AZ kwelucingo nge wholesale izinga okusezingeni. Ungakwazi njalo ukuqapha traffic lakho ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende abo uthole izinga ucingo bonke izindawo. izinhlelo Isitolo esidayisa yonke impahla ziklanyelwe ukuhlangabezana nezidingo abathengisi esikhulu abathengi VoIP service wholesale.
Independence Umhlinzeki VoIP futhi likuvumela ukuthengisa okudayisa VoIP Ukunqanyulwa, ukunikela high quality yezwi bese amanani yokuncintisana. Unganikeza imizila eqondile evamile CLI, ngasinye amazinga ehlukene izinga futhi izilinganiso kumakhasimende AZ izindawo, apholile, locutorios, amakhaya, njll.
VOIP FOR IBHIZINISI
VoIP kudala imizila nazo zonke izici zokuxhumana izinkampani ezinkulu ukuthi ukushaya izingcingo ku-landlines nomakhalekhukhwini ezweni lakhe nezwe. SIP iziqu kudala izwi onokwethenjelwa futhi aphansi bese idatha phezu olulodwa eyizingqabavu inethiwekhi izixazululo zokuxhumana ibhizinisi kakhulu futhi kulula ukusingatha.
Amathuba Ukudala uQobo Your Business VoIP akupheli ...
Nge VoIP ibhizinisi lakho siqu yandisa inkonzo yakho ukuthi yimuphi ukuphela, kunoma yiliphi izwe.
Qala inkampani yakho siqu uthengisa ezokuxhumana kanye IP telephony noma Voice phezu amakhasimende Inthanethi, amakhaya, izinkampani noma amabhizinisi nje edolobheni lakho.
Brand White Ngelakho:
With simiso, Uma umthengisi noma umthengisi, ngeke ukusebenzela esinye engrandecer inkampani, kodwa endaweni siqu igama lakho brand!
Amathuluzi "All in One":
Zonke amamojuli traffic, amazinga, ucingo, abasakaza nabadayisi, Amakhasimende kanye nabahlinzeki bethu ukulawula futhi uthinte kusuka kuphi!
Ngaphandle ukutshalwa enkulu:
Nge a utshalomali encane ungakwazi abeke ibhizinisi efonini yakho evela induduzo ekhaya lakho bese uqala ukuhola imali eningi.
inkululeko Ubude ukukhetha abathwali ukuthi ufuna ukwakha owakho VoIP amazinga kanye inzuzo amakhasimende kanye nabaphakeli emakethe.
ephakeme % Amaholo:
Dala amazinga akho bese uphatha umholo wakho siqu! Ayisekho nje control panel, kodwa ephelele Software VoIP Management.
VoIP iseva siqu:
Une-Server Windows 2008 ngeSpanishi nge VoipSwitch platform ukulawula wonke amasevisi e inkampani yakho Telefonia IP.
Clientes, abathwali, nabadayisi:
yakha amakhasimende, abahlinzeki noma nabadayisi ngoba VoIP amaminithi wakho futhi inikeza bonke abasebenzisi Inkampani ngokwenza izingcingo noma usabalalise amaminithi wakho.
Amanani angeziwe Competitive:
Ukuba umphakeli wholesale ungakwazi ukukhokhela ukudala amanani akho kanye ukuzidayisa at the best amanani zamakhasimende wakho.
Isitolo esidayisa yonke impahla / Umhlinzeki Isitolo esidayisa yonke impahla:
Okuhloswe ngaso VoIP abahlinzeka ngemisebenzi kanye amakhasimende okudayisa, lapho edinga eliphezulu izindwangu ngamanani ezingabizi VoIP AZ.
Wena umthengisi noma umthengisi VoIP Amaminithi?
Lona ithuba lokuba boss yakho siqu ...
Zenzele Business + ngokuba inzuzo umhlinzeki Amaminithi Global, lithole inkululeko yakho yezimali kanye babe nabadayisi akho noma abasabalalisi VoIP Amaminithi
nje 24 amahora, zingaba VoIP zefoni @ Empresari. Kungani?...
Njengoba umthengisi noma umthengisi Amaminithi kakade i ikhasimende iphothifoliyo osungulwe futhi kuyoba lula kakhulu ukuze sandise IP Izikhungo Voice.
INDEPENDIZARTE, It ikuvumela ukudala amazinga akho bese uphatha umholo wakho siqu! Ayisekho nje control panel, Une ephelele VoIP Management Software.
Ayikho Portales angeziwe, Manje ungaphatha akho epulatifomu VoipSwitch
Isilawuli kude sedeskithophu
Ukufinyelela lomsebenzisi nephasiwedi ngayinye
inkonzo Wide futhi VoIP traffic
Control Amanani kanye Amaminithi
Chaza izindleko kanye ukusetshenziswa contrala
Setha izinhlobo ezahlukene abasebenzisi
abathwali eziningana ngesikhathi esisodwa
VoIP Izinsiza kusebenza Uxhumano
Lungiselela yimuphi hardware izwi ip
Servicio de Amakhadi wokufonela
Sabalalisa ukubizwa amakhadi akho
Portal futhi VsPortal
Iphaneli umthengi kanye nomlando kwamakhasimende
Yenza amacala ngokufaka Onlineshop
Nezindaba umthethosivivinywa / invoyisa izinsiza zakho
Izikhungo Chat, SMS o BAKHALA
Kuhlanganisa ongakhetha eziningana isevisi yakho VoIP
Contrala namakholi angenayo naphumayo
Linikeza imizuzu amadokodo noma eshintsha
Lungiselela futhi nabadayisi, II no III ne portal ayo
futhi, Yimaphi amanye Umhlinzeki izinzuzo VoIP Uthola uMuntu?
Ukuqala ubizo ibhizinisi Inthanethi, akukho kufanele bazinike isamba esikhulu, kuphela utshalomali amancane iseluleko esihle, kungenzeka ukungena kule makethe.
a Usomabhizinisi-usomabhizinisi Ukuphumelela VoIP:
Thola leli thuba ibhizinisi Telefonia, kuyilapho abanye ake aphume.
Hlangana nabantu (resellers) ukuthi engakusiza uphumelele ebhizinisini lakho.
Akukhona nje ke inikeza isevisi wefoni ... wena ngokuhlangana nomkhaya, abangane kanye ibhizinisi s.
futhi ngaphezu kwakho konke ...
izindlela zakho siqu Nabadayisi Red Distributors kuphi emhlabeni ngakho, nezinsiza zokuxhumana inkampani yakho uyofinyelela wonke amagumbi.
Zethu Empresari uWarrant @ s VoIP Izikhungo
Kukhona amakhasimende eziningana zamazwe ngamazwe usebenzisa amasevisi ethu okuhlangene zokuxhumana ukuze ayoqala inkampani yabo pon zefoni Inthanethi (VoIP) futhi kwaba nemiphumela emihle ... Ngamathuluzi "BONKE IN ONE" Software VoipSwitch wasuka VoIP nabadayisi noma abasabalalisi imizuzu babe Empresari @ s ezokuxhumana!
Azikho izizathu zokwenza ibhizinisi inthanethi: Ngaqala siqu inkampani VoIP wefoni isandla ServerVoIP.com wesevisi yami yamakholi ukuba nomakhalekhukhwini kanye okungaguquki. Manje ngikhokhele amakhasimende ami ongakhetha amaningi afana hostings, isofthiwe, hardware, ukukhangisa, phakathi kokunye.
Ngicabanga inkampani yami 8 imithombo umsebenzi oqondile emzini wami futhi izinkulungwane elakhiwe lemisebenzi ngokungaqondile okungaphezu kokuphonswe 19 amazwe: Colombia, Peru, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Guatemala, Dominican republic, Costa Rica, Puerto Rico, Mexico, US, Spain, Brazil, Italy, Andorra, Morocco, Japan kanye Ecuador.
Con Call Speed, inkampani quiteña, Sanikezela marketing ezokuxhumana kanye nobuchwepheshe imikhiqizo. Iminyaka eyisishiyagalombili kanye sibonga yesikhulumi ServerVoIP.com ngokusekelwa kanye video tutorials; Asikwazi ukunika isevisi e Spanish amakhasimende ezinkampani nge uhlelo nge phone Inthanethi.
Ngifuna ukuba Umhlinzeki VoIP Amaminithi, MANJE >
Kuyini VoIP zefoni Software Inkampani Yakho?
Software VoIPswitch Kufakiwe en-Windows Server 2008, futhi kwezinye amaseva (elinye ibanga) Windows Server 2012.
okufushane VoipSwitch 2.0.0.980.
VoIP yothengisa umkhiqizo iyoba Supplier Global.
Voipswitch inawo wonke amathuluzi okudingayo ukuze isevisi ye-Inthanethi. Kufanele uphathe izakhiwo Administrator, Switchboards futhi softphones okuxhumana. ngakho; Ngayinye Shintsha kukunika engcono Inthanethi nesipiliyoni ezokuxhumana. Kuyinto isiteji Amazing.
Umhlinzeki Ukuba Amaminithi Umhlaba manje kungenzeka neseva futhi platform emakethe eziphelele kakhulu. ServerVoIP kwenza kube nokwenzeka garatizado saka- ngakho yini ukushayela ngaphandle kolwazi lobuchwepheshe, ukuvumela ukuba iqale ukusebenza kusuka induduzo ekhaya lakho futhi wenze imali kweso.
nje 24 amahora, zingaba VoIP zefoni @ Empresari
Njengoba umthengisi noma umthengisi Amaminithi abe ikhasimende iphothifoliyo osungulwe futhi kuyoba lula kakhulu ukuze sandise IP Izikhungo Voice
Khetha Server okudingayo VoIP yakho zefoni Inkampani.
kusukela 50 ngemuva kwalokhu iziteshi izwi kusuka $ 150.00 Dollars ngenyanga, Kukhona konke-in-one for zonke.
ukufunda okuningi >
othengisa VoIP, Bheka ezingaba kufanele ube Umhlinzeki VoIP ...
A VoIP yothengisa umkhiqizo umsebenzi nge umhlinzeki Amaminithi olulodwa
Ibhizinisi VoIP isebenza nge-IP multivendor
futhi yiso lokho wena okwenzayo lapho VOIP Iseva ...
Abasebenzisi bakho, Igcina imali kufomu ifoni nyangazonke lapho ushayele izingcingo zasendlini kanye nezingcingo mobile phones futhi kusukela kuphi emhlabeni kuyinto eza kuqala eliphelele.
Futhi uma kukhona EMPPRESAS ezinikeza izindleko low Stegen @ s ukukhulumisana nomkhaya, abangane noma sebhizinisi ngokuphelele Kulungile ukukhokhela isevisi!!!
futhi Indlela Ongakuyeka Ngayo Basize?...
Nge siqu iseva VOIP yakho unayo rainbow ngamathemba ukuxazulula izidingo amakhasimende akho. cishe, VoIP Umhlinzeki omisiwe ekubeni kuphothifoliyo abasabalalisi emhlabeni wonke Amaminithi; kukunikeze ikhono ukuba inethiwekhi enkulu abathwali ngenxa yesizathu esisodwa noma ngaphezulu Okuqondiwe.
Dala amazinga akho,
Ukwakha izinhlelo zakho siqu,
Umzuzu ukusabalalisa amadokodo akho noma eshintsha,
Vender tus propias ukushaya amakhadi (Ukushayela nge ikhadi),
Phatha imali yakho engenayo siqu!
Kungenxa yokuthi akayena nje une control panel for VoIP yothengisa umkhiqizo, Une ephelele IP zefoni Management Software (ngayinye).
"Sinikeza best Servidores VoIP con VoIPSwitch para su Empresa de Telefonía IP desde el año 2008 en todos los rincones del mundo"
inkampani Ngelakho telephony Inthanethi nge VoipSwitch
Wena nje udinga ukuthatha isinyathelo futhi EMPRENDER!
- Iseva VoIP kuhlanganisa FULL HD IMIQOPHI tutorials inthanethi ekuphatheni yesikhulumi ezokwenza ube i Isazi -
MAHHALA: Isahluko sokugcina sencwadi yami Discover
Yimalini ungenza nge VoIP?
Ngifuna wamamukela FREE Manje>
Ulwazi lakho 100% segura con nosotros y nunca será compartida.